GPS / Midziyo - Geofumadas
Zvishandiso uye zvigadziro zvekuongororwa uye cadastre
KUSHANDISA UAV EXPO AMERICAS
Ino Gunyana 7,8, 9 uye XNUMX yegore razvino, iyo "UAV Expo America" ​​ichaitirwa muLas Vegas Nevada - USA. Icho chinotungamira chekutengeserana cheNorth America uye musangano unotarisana nekutengeserana kweUAS kusangana pamwe nekushanda pamwe nevamwe varatidziri kupfuura chero chimwe chiitiko chezvekutengesa drone. Inovhara madingindira ...
Cadastre enyuchi hono
FARO icharatidzira kuona kwayo 3D tekinoroji ye geospatial uye kuvaka ku2020 World Geospatial Forum
Nekuda kwekuburitsa kukosha kwehunyanzvi hwehunyanzvi hwehunyanzvi hwenzvimbo iyi muupfumi hwedigital uye kusangana kwayo nematekinoroji ari kubuda munzvimbo dzakasiyana dzebasa, musangano wepagore weWorld Geospatial Forum uchaitwa muna Kubvumbi unotevera. FARO, inovimbwa zvakanyanya sosi yeiyo kuyerwa kwe3D, imaging uye…
Nhau dze HEXAGON 2019
Hexagon yakazivisa matekinoroji matsva uye yakaziva zvigadzirwa zvevashandisi vayo paHxGN LIVE 2019, musangano wayo wepasirese wemhinduro yedhijitari. Uku kusangana kwemhinduro dzakapatsanurwa muHexagon AB, ine chinzvimbo chinonakidza muma sensors, software uye tekinoroji yekuzvimiririra, yakaronga musangano wayo wemazuva mana wezve tekinoroji kuVenetian muLas Vegas, Nevada, USA.
I3D mobile laser scanning application inobata mubayiro weF IF DESIGN
Leica Cyclone FIELD 360 application yakapihwa yechipiri dhizaini muUFI DESIGN AWARD 2019. Pamwe chete nekambani yemushandisi (UX) Ergosign, Leica Geosystems yakaratidza kunyorera muchikamu chekubatanidza. Kwemakore makumi matanhatu nematanhatu, iF DESIGN AWARD yave ichizivikanwa semutambi wehunhu we ...
Geotech + Dronetech: haufaniri kukanganwa
Musi waApril 3 na4 wegore rino 2019, Fairoftechnology - kambani yeSpain, inogara kuMalaga, inoronga mhando dzese dzezviitiko zvine chekuita netekinoroji - iri kukoka vese vanoita geoengineering kutora chikamu muchiitiko chikuru, kwavano ivo vacharatidza zvakawanda zvitsva mumakore achangopfuura. Fairoftechnology, ine akawanda ...
6 geo-engineering mabhuku ehurukuro yakasununguka
Nhasi tichakuratidza ma ebook uye zvinyorwa kuti unzwisise kufambira mberi kwetekinoroji mumunda we geo-engineering uye zvazvinoita pahupenyu hwezuva nezuva. Zvese zvakasununguka uye zviri nyore kuwana sarudzo. Takatarisana nekukura kwakasimba kwetekinoroji kunoiswa munzvimbo ye geospatial, zvakakosha kuti ugare wakagadziridzwa kuitira kuti mipiro yedu yebasa irambe iine ...
Geospatial tekinoroji, iro basa uye kukosha mukati meiyo IT chimiro mune Yekutakura Madhipatimendi.
Tekinoroji yeGeospatial. Yakafungidzirwa seyese tekinoroji inoshandiswa kutora, kubata, kuongorora, kuona nekuparadzira zvese data neruzivo zvine chekuita nenzvimbo yechinhu, chakapfuura pfungwa yayo yekutanga yetatu inova inosanganisira GIS, GPS uye Remote Perception (RS mukati Chirungu) inosanganisira matekinoroji ari kubuda anoshandisa chinhu ...
Iyo yemukati georeference
Kana tichiverenga dzidziso dzakasiyana dzinotsigira kutaurirana kunoitwa necartography, zvese sesainzi kumiririra zviitiko zvejogirafi, uye seunyanzvi hwekupa ruzivo urwu maitiro anodikanwa, tinoona kuti nguva yatiri kurarama inosanganisira zviito zvakawanda muhupenyu hwezuva nezuva. kwatinoshandisa georeferefisi sechiito ...
Chigadzirwa Kuenzanisa Chikamu
Geo-inoenderana inoisa munzvimbo imwe, kukosha kwese kwechigadzirwa kweGIM International uye Hydro International. Geo-matching.com ndeye yakazvimirira chigadzirwa kuenzanisa webhusaiti ye Hardware nesoftware nyanzvi mumunda wegeomatics, hydrography, uye nedzimwe nzira dzakanangana. Tinoda kutungamira vashanyi vedu kuburikidza ne labyrinth ye ...
Microstation: Tumirai mazano uye zvinyorwa kubva kune Excel
Mhosva yacho: Ndine data rakaunganidzwa pamwe neGPS Promark 100, uye nekushandisa iyo GNSS post-processing application ine zvikamu izvi, zvinondibvumidza kutumira ruzivo kuExcel. Iwo makoramu akaratidzirwa neyero ndeaya ekumabvazuva uye ekuchamhembe anotungamirirana uye awo akaringana chirevo; zvimwe zvese ingori ruzivo rwakanangana nekutumira-kugadziriswa. Dambudziko: Ini ndinoda vashandisi ku ...
Bentley Systems Office kuti zvinouraya